UK Visa Information - Sekolin'ny Fiteny Foibe, Cambridge
Miankina amin'ny zom-pirenenao sy amin'ny fotoana firy tianao hahatongavana any Angletera dia mila mangataka visa ianao. Ho an'ny fijanonana hatramin'ny 6 volana dia Visa ho an'ny mpitsidika mahazatra izany, ary mandritra ny 6-11 volana, Visa fandinihana mandritra ny fotoana fohy. Azafady mba jereo ity amin'ny tranokalan'ny Governemanta UK www.gov.uk/apply-uk-visa izay ahitanao raha mila visa ianao, ary afaka mampihatra amin'ny Internet ihany koa. Nikaroka momba an'ity tranonkala ity izahay ary, na dia tsy mahay manome toro-hevitra ara-dalàna aza izahay, dia fantatray fa raha te hangataka visa ianao dia tokony hanana antontan-taratasy marina ao anatin'izany:
Ny taratasy fangatahana anao izay manamarina fa nekena ho dingana iray ianao ary nandoa ny saram-panananao. Ny taratasy dia hanome fanazavana momba ny fianarana.
Porofo mampiseho fa manana vola ampy ianao handoavana ny fijanonanao any UK.
Raha tsy mahomby amin'ny fahazoana visa ianao dia andefaso anay ny kopian'ny endrika fandavana ny visa ary halaminay ny famerenam-bola. Hodininay ny sarany rehetra ankoatry ny herinandro iray sy ny saram-pandraisana hipetrahana mba handoavana ny saram-pitantanana.